ngisho nakanye igama elithi "isiphuzo esigeza inhliziyo" Ngokuqinisekile wonke umuntu oye wezwa kuBaba futhi. Kuyini lokhu? Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi. Isiphuzo esigeza inhliziyo - isiphuzo kunalokho ebuthakathaka oludakayo ngaphambi kokudla ukuze acime ukoma kwawo futhi bashune edilini oluzayo. Akuzange inkinga isidlo, ezinjenge-lemon asikiwe, iminqumo, ama-alimondi kanye nezinye izinhlobo namantongomane. Kufanele kuqashelwe ukuthi, ngaphezu iwayini nemimoya imikhiqizo, kunezinye aperitifs: nectars neziphuzo ukuthi awanalo utshwala.
Njengoba sakamuva singabangela bondliwe soda, soda, amaminerali noma amanzi avamile abandayo. Iningi luncanyelwa isiphuzo esigeza inhliziyo nectars kukhona lemon, ubhamubhamu, utamatisi, yamagilebhisi (hhayi amnandi kakhulu). Futhi orange efanelekayo, emhlophe, Birch. Ukuthandwa okwandisa won vermouth. He is isiphuzo esigeza inhliziyo kakhulu. Abaningi, uye kakade wakwazi ukubamba fancy. Kufanele kuqondwe ukuthi isiphuzo esigeza inhliziyo emva kokudla engakhishwa.
Kunemikhakha emithathu iziphuzo zikhishwa ngaphambi kokuba kudliwe: exubile, kuhlanganiswe, kanye olulodwa. Amagama ukuthi babeshaye esikhonkosini.
Lezi zingozi zihlanganisa ama aperitifs, ehlanganisa kuphela into eyodwa. Ngokwesibonelo, kuphela champagne, vermouth noma okuthize eziqinile ngaphezulu.
Ngokuqondene appetizer inhlanganisela, limelela izinhlobo eziningana zotshwala eziletha kanyekanye, isibonelo iwayini, lamanzi esiphethu futhi nectars. Yiqiniso, konke lokhu ngakhonza izitsha ezahlukene. Vodka, nogologo newayini - in ingilazi, amanzi - yi ingilazi, nectars - e kushe, champagne - e yewayini. Konke lokhu imele kwelinye ugqoko, futhi wonke umuntu angathatha yini ayithandayo. Iwayini - i isiphuzo esigeza inhliziyo, kuhambisana kahle amadili. Emicimbini enjalo kufanele izinhlobo zophuzo oludakayo.
Uyini appetizers okuxubile, cishe akwenzi mqondo ukuchaza. Igama kusikisela yikho konke ecacile. Ziyakwazi nenye zonke izinhlobo zotshwala. Ngokuvamile kuvela kuhle esihlwabusayo. Ukuze ube isiphuzo esigeza inhliziyo okuxubile endaweni yokuqala akuzona iwayini elimnandi noma cocktail.
Ngaphambi ekuqaleni ukudla, lapho izivakashi ayaqala nje ukuza etafuleni, ngokuvamile babekhonza aperitifs. Bathi ume ethreyini encane, embozwe ngendwangu.
Yini-ke ukukhonza njengomdala isiphuzo esigeza inhliziyo? Ngaphambi dinner, ungakwazi ukunikeza kancane vodka, ugologo, utshwala ashisayo, likagologo gin. iwayini eqinile ezibizayo efanelekayo eyodla. Futhi wamukela bitters. Ochwepheshe bathi enhle isiphuzo esigeza inhliziyo vermouth unikeza ice, hlambulula lamanzi esiphethu noma ijusi kusukela izithelo.
Ukukhethwa enkulu iziphuzo
Ngokuvamile, ukudla kungenziwa wakhonza iyiphi iziphuzo ezingenashukela. Zingase inikelwe eceleni noma ifomu okuxubile. Kuze kube manje, akukho imithetho nokhahlo kakhulu ngokuphathelene aperitifs. Njengoba isiphuzo enjalo kungenziwa enikeziwe ne-Champagne, nogologo, futhi armagnac futhi utshwala, ugologo newayini. Ngiyavuma, ukukhetha sikhulu ngokwanele. Iziphuzo kungaba kokubili te futhi eqinile, futhi ephansi utshwala buhlanjululwe ngamanzi noma isiphuzo sezithelo. Ngokuvamile, izinketho eziningi. Isiphuzo esigeza inhliziyo - isiphuzo ukuthi ngokuvamile ngakhonza zokudlela ngaphambi kokudla. Kufanele uqaphele lokhu, uya isikhungo ehlonishwayo.
Funda kabanzi mayelana aperitifs
Ngo kubanda, aperitifs kungaba: hot chocolate vodka ngokuthi "Mocha" e izinkomishi ezincane (ubuningi 50), ngezibhakela, mulled iwayini, grog e izinkomishi ezincane ezenziwe ngengilazi (50 kuya ku-100 g). Nokho, uma mithandazo bephethe coasters ezenziwe ngokhuni. Ifanele njengoba izinkomishi sobumba.
Uma ufuna ukuzenza bahle ngempela izivakashi, kufanele sibanikeze sherry noma vermouth njengenhlangano isiphuzo esigeza inhliziyo. Kuyini, cishe wonke umuntu uyazi. Ngokuqondene lokuqala, kulethwa ngisho nalapho yengezwe isobho, esebenza njengesikhali isidlo esikhulu. Kuwufanele ukukhumbula kahle leli phuzu elibalulekile. Sherry behlezi kahle isobho, okuyinto yengezwe ubhontshisi omnyama. Okokuqala, isiphuzo efudumele ukuthi ngokuvamile yagcwala carafe. Bese is batheleka encane izibuko iwayini esime V By endleleni, sherry ongema decanter isikhathi eside. Okunye iziphuzo kungaba ugqoko ngezindlela ezahlukene - kungaba izinkomishi enhle kancane iqhwa, noma abandayo noma esitsheni esikhethekile appetizer. Kumele ulandele le mithetho yokwenza izivakashi bajabule. Kufanele kuqondwe, ukuthi kubalulekile kukhona aperitifs. Kuyini, uyazi.
Ngokuqondene emathileyi, kumele encane. Ukuze oludakayo isiphuzo esigeza inhliziyo izibuko zokuhamba for lungene 35-50 g Ngokuqondene brandy, khona-ke kufanele alethe e izibuko ezinkulu at 25-30 g eliphakathi kwe-okwenyanga. Enongiwe, futhi iwayini elimnandi batheleka izingilazi Maderna '75 Ngaphezu kwalokho, isiphuzo akufanele ugcwalise kubo phama. Ukuze itafula iwayini lafitnye zokuhamba kanye Rhine yewayini. Njengoba for iziphuzo okuxubile, bekhonza inkinobho yokuguquguqula, ngamanye amazwi, e ingilazi cocktail.
Ungadla for aperitifs
Uma izivakashi bayahamba kancane, kanti abanye imisiwe, kubalulekile ukwethula, kanye iziphuzo Ungadla. Kodwa-ke kuvunyelwe ukuhambisa kuphela lokho akunakwenzeka bengadeli, isibonelo anosawoti alimondi, izithelo, amantongomane okugazingiwe, kwezinye izimo, canapes ezincane (sandwich amancane). Futhi kungaba ukunikela okuthile kancane elula. Ngokwesibonelo, usawoti unamathela. Abanye bakholelwa ukuthi yaba into ebaluleke kunazo zonke esidlweni - lena aperitifs. Kuyini kahle konke umuntu ofundile. Ngakho-ke, kufanele sizame awafuni ukumdumaza izivakashi futhi umkhosi ezingeni eliphezulu, ukuze wonke umuntu washiya okuvelayo okuhle kuphela.
Scotch Passport: ukunambitheka zenkululeko nokuzibusa
Indlela yokwenza banana utshwala ekhaya?
Biography futhi ubuzwe Edkham Akbulatov. Krasnoyarsk Administration
Valeriy Gaevsky: Biography, umndeni, umsebenzi
I-Melodrama "Oasis of Love": abadlali, izindima kanye nesakhiwo esifushane sefilimu